सार्वजनिक सुनुवाईमा मण्डन देउपुर नगर प्रमुख वाईबाले भने “नविराउनु नडराउनु,हामी जनताकै सेवामा छौं ।”(भिडियो सहित हेर्नुहोस्) – NamoBuddha Khabar
सार्वजनिक सुनुवाईमा मण्डन देउपुर नगर प्रमुख वाईबाले भने “नविराउनु नडराउनु,हामी जनताकै सेवामा छौं ।”(भिडियो सहित हेर्नुहोस्)
शुक्रबार, पौष १३, २०७५ | १६:४२:०५ |
कुन्ता–मण्डन देउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोक बहादुर वाईबाले आफूहरु निरन्तर जनताकै काममा क्रियाशिल रहेको बताउनुभएको छ । समृद्ध नगर बनाउने अभियान सबैको साथ र सहयोगबाट सफल बनाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता उहाँको छ । शुक्रबार कुन्तावेशीमा आयोजित “जनतासँग जनप्रतिनिधि” अन्तरगत सार्वजनिक सुनुवाई तथा साक्षर नगर घोषणा कार्यक्रममा उठेका जनगुनासो सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो–“नविराउनु नडराउनु,हामी जनताकै सेवामा छौं,देखिएका समस्या समाधान गर्न पछि हटेका छैनौं,अहिलेसम्म हामी राम्रो गतीमा अगाडी बढरहेकै छौं ।” स्थानिय सरकार स्थानियको घरदैलोको सरकार भएकोले उत्तिकै जिम्मेवार भएर विकास निर्माणका कामहरु भईरहेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नगरका प्रशासकिय अधिकृत शेखर आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ र चालु वर्षमा नगरपालिकामार्फत भएका र भईरहेको विकास गतिविधि र बजेटबारेको संक्षेप जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसपछि सहभागीहरुले आफ्ना जिज्ञासा सहितका प्रश्न,सल्लाह र सुझाव राखे ।
त्यसक्रममा स्थानिय सत्य सिं लामाले नगरका थुम्काहरुमा पर्यटक भित्राउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । वडा नम्बर ७ का पार्वती सापकोटाले नगरको फोहोर व्यवस्थान गरी दुर्गन्ध र यसको समस्याबाट बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसमा नगरपालिकाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । त्यस्तै सानुकान्छा दनुवारले सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सिमा विवादले ईन्द्रावती वगर छेउछाउको दनुवार वस्ती पिडामा रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
स्थानिय शिक्षक नवराज ढकालले नगरमा शैक्षिक विकासका राम्रो प्रतिफल हासील हुनुमा नगरपालिकाले ठुलो भुमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । सहभागि स्थानियले रोजगार वृद्धिको कार्यक्रम,कृषि अनुदानमा पारदर्शिता,सिञ्चाई तथा बाटोको विकास व्यवस्थापनमा जोड दिए ।
नगरप्रमुख वाईबाले जनगुनासो सम्बोधनका साथै नगरको आगामी योजना समेत सुनाउनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कुरा व्यवहारमा लागु गरिरहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“हामीले त वडा वडामा नागरिक सुनुवाई गरेका छौं,हामीले गरेका कामहरु कति सहि छन् ? के उपलब्धी हाँसील हुदैछन् ? कहाँ कमजोरी रह्यो ? यि सबै कुरा मनन गरेकै छौं,अहिलेसम्म अनियमितता भएका,विकास अलपत्र पारेका छैनौं,सबै जनतालाई थाहा छ ।”
जनताका गुनासोमाथि प्रमुख वाईबाको सम्बोधन हेर्नुहोस् ।